Maty tamin'ny faha-95 taonany i Gene Dietich, mpanao sariitatr'i Tom sy Jerry sy Popeye | Famoronana an-tserasera
Omaly dia nandao antsika i Gene Dietich iray amin'ireo talen'ny talenta, mpialamboly ary mpandresy Oscar tamin'ny faha-95 taonany. Sariitatra izay nanomboka ny diany tao amin'ny indostrian'ny sarimihetsika sarimihetsika tany Etazonia fony izy 20 taona ary ny tànany dia nandalo ireo sary mihetsika lehibe ananan'ny olona fanta-daza toa an'i Tom sy Jerry ary ilay Popeye angano.
Ny alakamisy lasa teo dia hita izy tsy misy aina intsony ao amin'ny tranony ao Prague ary amin'izao fotoana izao dia mbola tsy fantatra ny antony nahafatesany. Sariitatra mahafinaritra iray izay nanome fiainana ny zava-tsoa adala an'ny saka sy ny totozy ary namela marika lehibe tamin'ny taranaka samihafa, tahaka an'io Popeye io miaraka amin'ny kanety epinara.
Gene Dietich dia teraka tamin'ny 8 Aogositra 1924 tao an-tanànan'i Chicago ary tamin'ny asany dia nahavita Oscar ho an'ny horonantsary fohy "Munro." Nandeha tany California izy tamin'ny faha-20 taonany hanombohany ny asany amin'ny maha-mpanao sary azy, saingy tsy maintsy nirotsaka tamin'ny fiaramanidina amerikana mandra-pahatongany tsy afaka nanohy izany noho ny olana ara-pahasalamana.
Niverina tany California izy rehefa nanohy ny asany tamin'ny naha mpanao sariitatra azy nanao sonia fifanarahana tamin'i Terrytoons ary avy eo niasa ho talen'ny famoronana. Mpana sary sy mpaka sary iray izay nahazo fanendrena Oscar marobe ho an'ny pataloha fohy mihetsika mandra-pahatongan'ny fandresena lehibe azony rehefa nomena ny Oscar ho an'ny fohy indrindra ho an'i Munro izy.
sokajy Tarehimarika fohy 13 Tom sy Jerry teo anelanelan'ny 1961 sy 1962 ary teo anelanelan'ny 60 sy 63 dia niara-niasa tamin'ny orinasa Rembrandt Films izy izay niandraiketan'i Popeye. Andian-tsoratra maromaro izay nisy fiatraikany tamin'ny kolontsaina pop ka mandraka ankehitriny dia manohy manome loharanom-baovao ho an'ny mpanakanto hafa toy ity tetikasa ity izay efa noresahintsika tamin'ny ora tany amin'ireo faritra ireo. Animation mahafinaritra be no nandao antsika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Gene Dietich dia mamela antsika, mpanao sariitatr'i "Tom sy Jerry" sy "Popeye"
Maimaimpoana ny Adobe Spark mandritra ny 60 andro hatramin'ny 15 Jona